लक्ष्य बिनाको घुमफिर वर्ष कसरी सफल हुन्छ ? - Arthatantra.com
लक्ष्य बिनाको घुमफिर वर्ष कसरी सफल हुन्छ ?
अस्थिर सरकार पर्यटनको बाधक, पर्यटकलाई प्रोत्साहन गरौं
पर्यटन प्रबद्र्धनमा मुख्यरुपमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । अस्थिर सरकारका कारण पर्यटन क्षेत्रमा एउटा सचिव २ वर्षसम्म टिक्न नसक्नु बिडम्बना हो । छिटो छिटो सरकार परिवर्तनले पर्यटन क्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो बनाएको छ । बिदेशीलाई भिसा दिन हामी धेरै कन्जुस्याई गरिरहेका छौं । मल्टिपल भिसा दिएर बिदेशी पर्यटकलाई सम्मानको रुपमा हेर्न सिकौं । उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउँ । अहिले चीनका पर्यटकलाई भिसा छुट दिँदा उनीहरुले आफुलाई सम्मान गरेको महशुस गरेका छन् । पर्यटक धेरै भित्रिए भने स्वतः उनीहरुले गर्ने खर्चले मुलुकलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
क्षेत्रिय पर्यटन विस्तारमा जोड
पश्चिमा मुलुक अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया लगायतका देशका पर्यटकहरु मौसमी प्रकृतिका हुन्छ । क्षेत्रिय पर्यटकहरु बाह्रै महिना आउन सक्दछन् । त्यसैले क्षेत्रिय पर्यटनको विकास नभएसम्म अन्य देशका पर्यटकले १२ महिना चल्दैन । क्षेत्रिय पर्यटकहरुसँग चाडपर्व, बिदा लगायत कुनै न कुनै सन्दर्भ परेर बाह्रै महिना भ्रमण गरिरहने हुन सक्छन् । र बाह्रै महिना एक न एक किसिमको पर्यटकको आगमन भईरहन सक्छ । क्षेत्रिय पर्यटकलाई केन्द्रित गर्ने हो भने सहजै १५÷२० लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिनेछ ।
हवाई भाडा महंगो
नेपाल विशेषतः हिन्दु धर्मालम्बी र बुद्ध धर्मालम्बीको देश हो । यहाँ विश्वसम्पदा सूचिका थुप्रै सम्पदाहरु, प्राकृतिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक लगायत पर्यटनको एथेष्ट प्रोडक्ट छ । तर यहाँ सोचेअनुसार पर्यटक आउन नसक्नु भनेको पहिलो त हवाई भाडा एकदमै महंगो भयो । हामीकहाँ अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक दुवैतर्फका हवाई भाडा अति नै महंगो छ । सोही कारण लागतको तुलना गर्दै पर्यटकहरु पनि नआउने र अरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सकिराखेका छैनौं ।
संघीयतामा जाँदा के हुन्छ पर्यटन ?
देश संघीयतामा जाँदा नाट्टाको कार्यक्षेत्र विकास र विस्तार हुनु आवश्यक छ । अहिले हामी पूर्वाञ्चल (मेची, कोशी, सगरमाथा, जनकपुर), केन्द्रमा (वागमति र नारायणी), पश्चिमाञ्चल (गण्डकी, धौलागिरी), सुदुरपश्चिम (कर्णाली, राप्ती, महाकाली र भेरी) मा केन्द्रित छौं । संघीयता अनुसार अब भने सातवटै प्रदेशमा नाट्टाको उपस्थिति रहने गरी बिधान संशोधन हुँदैछ । पर्यटकीय हिसाबले पनि सोहि अनुरुपका कार्ययोजना अगाडि बढाईन जरुरी छ । संघीयताअनुरुप स्वायत राज्य भएपछि कुनै एक प्रदेशका नागरिकले अर्काे प्रदेशका लागि बाधा, अबरोध पुर्याउन पनि सक्छन् । कर, लेबी लगायतका कुरा आउन सक्छन् । भोलिका दिनमा निश्चित प्रदेशमा आवतजावत गर्ने समय निश्चित समयसम्म हुने भनेर तोकिन सक्छ । त्यसपछि बन्द हुन्छ भनिदिन पनि सक्छन् । प्रदेशभित्र आगमन र बहिर्गमनको समय तोकिन सक्छ । त्यसैले पर्यटकीय गतिबिधि र यो व्यवसायलाई असर नगर्ने गरी प्रदेशहरुको विकास गरिनुपर्छ । देशलाई आधुनिकिकरण र शहरीकरणमा परिणत गर्दै जाँदा पर्यटकीय क्षेत्र हराउँदै गएका छन् । यतातर्फ ध्यान दिंदै विकास कार्यले पर्यटन ओझेलमा पर्नुभएन ।
२० लाख पर्यटक आए भने काठमाडौमा कहाँ राख्ने ?
भोलि हामी कहाँ २० लाख पर्यटक आए भने काठमाडौमा राख्ने ठाउँ पनि नहुन सक्छ । हामीले दिने सेवा सुबिधाले नपुग्न सक्छ । अहिले नै हेरौं न एउटा पाँचतारे होटल बनाउनुपर्यो भने सम्भवतः काठमाडौमा जमिनै छैन । किनेर बनाउन असम्भव हुन्छ । त्यसैले अब सरकारले निश्चित स्थानहरुलाई पर्यटकीय गतिबिधिका लागि भनेर विशेष स्थानको घोषणा गर्नुपर्ने खाँचो छ । ताकि भोलिका दिनमा होटेल, अस्पताल लगायतका संरचना तयार गर्न पनि सकियोस् । हामीले राज्यलाई सुझाव पनि दिएका छौं । हिजोका दिनमा ख्याल नगर्दा पर्यटकीय दृष्टिले काठमाडौ सुन्दर हुँदा हुँदै पनि विश्व सम्पदा सूचिमा परेका पर्यटकीय स्थल र केहि धार्मिक स्थान बाहेक अन्य पर्यटकीय स्थल केहि पनि बाँकी छैन ।
नाट्टाको अन्तर्राष्ट्रिय संजाल
नाट्टाले सिंगापुर, मलेसिया, लाओस, भुटान, टाई सँग आपसी पर्यटन विकासका सम्झौता गरेको छ । अहिले भारतको डोमेस्टिक टुर अपरेटर एसोसियसन सँग पनि सहकार्य गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाईएको छ । भियतनाम, म्यानमारमा एसोसियसनले एमओयु (सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर) गर्दैछ । यी सम्झौता र सहकार्यले मुलुकलाई प्रबद्र्धन गर्नेछ । ट्राभल क्षेत्रका एसोसियसनको विश्वव्यापी छाता संस्था युनाईटेड फेडरेसन अफ ट्राभल एजेन्ट एसोसियसन (उफ्टा) को नाट्टा पनि सदस्य छ । अहिले सार्क स्तरीय उफ्टा क्षेत्रिय एलाईन्स बनाएका छौं । व्यवसायीक क्षेत्रको बारेमा अध्ययन गर्ने राम्रो प्लेटफर्म भएको छ ।
रात्री जीवन व्यस्त बनाउनुपर्यो
घरहरुको विस्तार भए सँगै रात्रिको समयमा नाईट क्लबहरुमा ऐतिहासिक, साँस्कृतिक कार्यक्रम गर्न सकिएको छैन । खाना खाने ठाउँमा केहि मज्जा लिनका लागि नाचगान देखाईन्छ । तर त्यसमा पनि स्तरियता छैन । दिनभर घुम्ने पर्यटकलाई राति पनि व्यस्त बनाउन सक्ने कार्यक्रमहरु अगाडि बढाईनु पर्छ । नेपाल आउने पर्यटक दिन भर हिंडेर थाके पछि बेलुका होटल गएर सुत्ने भन्दा अन्य कार्यक्रम नै हुँदैन । कमसेकम राति १ बजेसम्म पर्यटकलाई विभिन्न कला संस्कृतिसँग जोड्न सकियो भने त्यो सम्झना नै उसको लागि अथाहा टुरीजम बन्छ । जसरी मिठो चिज खाँदा मन तृत्प हुन्छ, त्यसरी पैसा तिरेर आईसकेपछि चौबिस घण्टामा १५/१८ घण्टा पर्यटनमै सहभागी गराउन सकियो भने आउने पर्यटकले पनि जीन्दगीभर सम्झिरहन्छ र अरुलाई पनि नेपाल घुम्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ ।
दिनभर हिँडाउने थकाउने अनि सुताउनेको रुपमा मात्र पर्यटनलाई लिनुहुँदैन । काष्ठमण्डपको मन्दिरमा बसेर चिया पिउनु पनि पर्यटन हो । पर्यटकले हेरिटेज साईडमा बसेर मैले चिया खान पाए भन्ने अनुभुति गराउनु अर्काे महत्वपूर्ण पर्यटन हो । हाम्रा अधिकाँस हेरिटेज साईड सात बजे पछि सुनसान हुन्छ, त्यो पनि ठिक भएन । त्यसलाई कमसेकम पनि राति एक बजेसम्म जीवित राख्न सक्नुपर्छ । पर्यटनमा मनोरञ्जन दिलाई दिलाई व्यापार व्यवसाय गर्ने हो ।
लक्ष्य बिनाको घुमफिर वर्ष
सरकारबाट घुमफिर वर्ष २०७३ घोषणा भयो । नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालय जसले यसलाई घोषणा गरेको हो, उसले हामीसँग कुनै पनि सहकार्य गरेको छैन । यतिसम्म कि सोधपुछ पनि भएको छैन । सोधपुछ मात्रै भएको भए पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने सहयोग गर्न सकिन्थ्यो होला । यो घोषणा गर्नु राम्रो हो । तर घुमफिर वर्ष कसरी सफल हुन्छ ? यो अभियानमा हामीले कसलाइ कस्तो पर्यटकलाई आकर्षित गर्न खोजेको हो ? नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई लक्षित हो भने सबभन्दा पहिले राज्यले निश्चित तहका कर्मचारीलाई निश्चित अबधिसम्मको भ्रमणलाई अनिवार्य गर्नै पर्ने भनेर किटान गरिदिनुपर्यो । यदि नीजि क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न खोजेको हो भने निश्चित स्तरभन्दा बढि खुद नाफा कमाउने वा निश्चित तहभन्दा बढि कर तिर्ने कम्पनीले पर्यटनमा रकम छुट्याएमा त्यसमा कर छुट दिन्छु भन्ने केहि न केहि व्यवस्था हुनुपर्यो ।
पर्यटक घुम्ने साधन खोई ?
आन्तरिक वा बाह्य पर्यटकहरु घुम्न त जाने तर घुम्न जाने साधन हामीकहाँ कत्तिको पर्याप्त छ ? एउटा स्कारपियो मोटरको न्युनत्तम ५० लाख पर्छ । जबकी भारतमा त्यसको ९ लाख रुपैंया पर्छ । ५० लाखको स्कारपियोमा कति पैसा तिरेर नेपाल घुमेर आउने ? र हवाई यातायतबाट जाउँ भन्ने हो भने कुन–कुन ठाउँमा हवाई यातायातबाट जान सकिन्छ ? आफ्नै सवारी साधन लिएर जाने हो भने हाम्रो पूर्बाधारको अवस्था के छ ? हाम्रो बाटो घाटो कुन खालको पर्यटकलाई उपयुक्त छ ?
रमाउन हो खुट्टा भाँच्न कोहि आउँदैन
वास्तवमा भन्ने हो भने पर्यटकहरु रमाउन आउने हुन्, कोचाकोच यात्रा र हातखुट्टा भाँच्न कोहि पनि आउँदैन । घुमफिर वर्षका लागि एउटा पूर्वाधार त हुनुपर्यो नि । आन्तरिक पर्यटनको लागि उसले आफ्नो स्तर अनुसार प्रयोगमा ल्याउनसक्ने यात्राका साधन हुनुपर्यो ।
पर्यटकीय बस कुनै पनि स्तरीय छैनन्
पर्यटकीय हिसाबले हामी कहाँ भएका पर्यटकीय बस न्यूनभन्दा न्यून स्तरका हुन् । काठमाडौ, पोखरा, चितवन लगायत स्थानमा जुन खालका बस चलेका छन्, हामी त्यसलाई पर्यटकीय बस भन्छौं । हरियो प्लेट पनि दिएका छौं । त्यो हाम्रो बाध्यता हो । ती पर्यटकीय स्तरका बस नै होईनन् र छैनन् । लागतको हिसाबले त्यो भन्दा सुबिधाजनक बस ल्याउने विकल्प पनि छैन । यदि त्यस्तै बस ल्याईयो भने लागत उठाउने कहिले ? एउटा भोल्भो ल्याउँदा दुई करोड पर्न खोज्छ । हिनोको बस साँढे दुई करोड नाघ्छ । साँढे दुई करोड रुपैंया लगानी गरेर नेपालको बाटोमा कहिले पैसा उठाउने ?
काठमाडौबाट चितवन जाँदैमा घुमफिर वर्ष हुँदैन । ती स्थानमा त मानिसहरु गईरहेकै छन् । नयाँ उत्कृष्ट गन्तव्यमा लैजाने कार्यक्रम र लक्ष्य लिनुपर्छ । तथ्याँकमै उल्लेख गरेर तोकिएको नयाँ गन्तव्यमा लक्ष्यअनुरुप मानिसहरुलाई लैजान सक्नुपर्यो । त्यसका लागि विभिन्न क्षेत्रहरुलाई सुबिधा, छुट र आकर्षण दिएर गन्तव्यको प्रबद्र्धन गर्नुपर्यो । कुनै पनि घोषणा मात्रै ठूलो कुरा होईन । त्यो संगसंगै समानान्तररुपमा दिने आपूर्ति र पूर्बाधारका प्रतिबद्धताका कुराहरु आउनुपर्दछ । जस्तो पर्यटन वर्ष २०११ मा नेपाल वायुसेवा निगममा २ वटा जहाज किन्ने भन्ने थियो पूरा भयो त ! अहिले त बढि ब्याज (९ प्रतिशत) मा व्यवसायीहरुले जोखिम उठाईरहेका छन् । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने हो भने सोहि किसिमका सरकारी प्रतिबद्धता आउनुपर्यो । भोलिका दिनमा पोखरा र लुम्बिनी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल बनेनन् भने १५ लाख पर्यटक नेपाल ल्याउन पनि मुस्किल छ ।
नाट्टाले आजसम्म गरेका र आगामि दिनमा गर्ने महत्वपूर्ण कार्यहरु :
– नाट्टाको विगतका कार्यसमितिबाट छुटेका र सदस्य एवं व्यवसायीका हकहितका विषयमा भएका पुराना ऐनकानुनलाई संशोधन गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ ।
– यातायात कार्यबिधि परिमार्जन गरी डिजेल कारहरुपनि हरियो प्लेटमा दर्ता हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अब डिजेल गाडी पर्यटन गाडीमा दर्ता भएर गुड्न सक्छन् ।
– हरियो प्लेटका सवारी साधनको हकमा रहँदै आएको अव्यवहारिक नियम र कार्यबिधिलाई विभागबाट परिमार्जन गराएर मन्त्रालयबाट स्विकृत गराई व्यवहारिक नियम र कार्यबिधि लागू गराईएको छ ।
– पर्यटन इजाजत कार्यबिधि अनुसार नविकरण नभएका कम्पनीहरुलाई पुनः नविकरणको बाटो खुल्ला गराईएको छ ।
– होटल, आन्तरिक हवाईसाधनमा देखिएका धेरै समस्या समाधान भएका छन् ।
– एयरलाईन्स, टिकेटिङ सम्बन्धी नयाँ–नयाँ प्रोडक्ट बजारमा आइरहेको अवस्थामा नयाँ प्रोडक्टको प्रयोगसम्बन्धी अन्तक्रिया, प्रशिक्षण र तालिम कार्यक्रम अगाडि बढाउने चरणमा छौं ।
– ट्राभल व्यवसायीले समेत तालिम लिनसक्ने गरी म्यानेजर (व्यवस्थापक) लेभलको तालिम प्रदान गर्ने उदेश्यका साथ आवश्यक विषयसूचि र कार्यतालिका तयार गरिरहेका छौं ।हाम्रा व्यवस्थापकहरुले विकसित देशकाहरु सँग प्रतिष्पर्धा गर्न म्यानेजर लेभलको यो तालिम सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेछ ।
– २०१७ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पर्यटन मार्ट÷ट्राभल मार्ट गर्नेर्छाैं । नाट्टाको अग्रसरतामा यो कार्यक्रम हुनेछ । सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्यमा आयोजना गरिने मार्टले नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ट्राभल एक्जिबिसन गर्ने फ्लोरको रुपमा नेपाललाई स्थापित गर्ने अपेक्षा लिएका छौं । त्यस्तै व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ ।
– आगामि डिसेम्बरमा नाट्टाले पचासौं (वर्षगाँठ) गोल्डेन जुब्ली (स्वर्ण जयन्ती) मनाउँदैछ । त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अतिथिहरुको आगमन हुनेछ । यसले पनि नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।
– सूचना प्रबिधिको युगअनुरुप सबै किसिमका तालिम प्रदान गर्नसक्ने भवन संरचना सहित यो कार्यसमितिले नाट्टाको नयाँ भवन निर्माण गर्नेछ ।
– पर्यटकीय पूर्बाधार निर्माणका विषयमा सरकारलाई घच्घच्याउने र पर्यटकलाई छुट हुने हिसाबले हवाई सेवामा सुबिधा दिनेतर्फ पहलकदमी अगाडि बढाउनेछौं ।
– पर्यटनमा नीजि क्षेत्रको लगानी बढाएर देशै पर्यटनमय बनाउनतर्फ नाट्टाले पहल गर्नेछ ।
– पर्यटन प्रबद्र्धनका धेरै काम गरिनेछ । पश्चिम क्षेत्रको पर्यटनलाई विशेष केन्द्रित गरेर अगाडि बढिरहेका छौं ।
पर्यटनमा ठूलो थ्रेट
अगामि दिनमा पर्यटनमा ठूलो थ्रेट (चुनौति) छ । भोलि सम्भावित ग्राहकहरु अन्यत्र जानसक्ने ठूलो थ्रेट छ । हामी धनी संरचना र विश्वमा भ्रमण गर्नैपर्ने मुलुकको सूचिमा छौं । तर हाम्रो गतिबिधिलाई बेलैमा सुधारेनौं भने पछि पर्दै जानेछौं । हाम्रो सर्भिस लेभल अन्तिमबाट गन्दै आउने हो भने विश्वकै ५ औं मा पर्दछ । सर्भिस डेलिभरी, कमिटमेन्ट, सेक्युरिटी, वातावरण सबै हेर्यो भने साह्रै कमजोर छ । हामी अत्यत्यै न्यूनमा छौं । त्यसैले हामीले बेलैमा ध्यान दिनुपर्नेछ, ताकि आर्थिकरुपले सम्पन्न मानिएका पर्यटकले नेपाल बारे सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेर भोलिका दिनमा थप पर्यटक भित्र्याउन सकियोस् ।
नेपाल एसोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स(नाट्टा) का अध्यक्ष आचार्यसंग अर्थतन्त्रका लागि रामेश्वर कार्की र हरिशरण न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित : २१ साउन २०७३
वि.सं.२०७३ साउन २१ शुक्रवार १५:४५ मा प्रकाशित
अघिल्लाे पाँच दिनमा ७ अर्ब ८० करोडको सेयर किनबेच !
पछिल्लाे मधेशमा मारिएकाका परिवारले हप्तादिनमै १० लाख पाउने !